Replacement For Google Reader | TechSectors
Replacement For Google Reader
10:21 AM LeaveaComment
Google Reader ဖျက်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်း ကြားတော့ နောက်နေတာလားလို့တောင် ထင်ခဲ့မိသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီသတင်းကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်က အင်တာနက်ဆိုင်ရောက်မှပဲ သိရမှာမျိုးလေ။တစ်ချိန် ဘလော့ကို အားကြိုးမာန်တက် ရေးနိုင်စဉ်တစ်ချိန်တုန်းက ဆိုရင်တော့ Google Reader ဖျက်သိမ်းတော့မယ်ဆိုတာကြားရင် အတော်ကြီးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိမှာ အမှန်ပဲ။
ခုကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ အင်တာနက်ကို တစ်ပတ်တစ်ခါ ပုံမှန်တက်ဖြစ်ဖို့ အနိုင်နိုင်။ RSS subscribers ဆိုတာလည်း ဘလော့မှာ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲ ရှိတာဆိုတော့ နိုင်ငံခြားက သိန်းနဲ့ချီတဲ့ RSS subscribers တွေ ရှိတဲ့ ဘလော့ဂါတွေအတွက်သာဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့မှာ Google Reader ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ ဒီသတင်းက ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်တော့ ဒီလောက်ကြီးထိ သိပ်တုန်လှုပ်စရာ မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပဲ ပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့် ထိခိုက်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက Google Reader မှာ RSS subscriptions လုပ်ထားတာတွေရှိတယ်။ အဲ့တာတွေကို တစ်​ခြား Feed Reader တစ်ခုခုဆီ ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားရတော့မယ်။ Google Reader က နောက်ထပ်လေးလလောက် သုံးဖို့ အချိန်ရသေးတယ် ဆိုတော့ Google Reader ကို အစားထိုးနိုင်မယ့် Feed Reader တစ်ခုခု ရှာဖို့ကတော့ အရေးတကြီး လိုလာပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ် Feed Reader ကိုရွေးချယ်ကြရင်ကောင်းမလဲ။
ရပ်တည်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကို အဆိုးဘက်ကနေ ပြန်ကြည့်ရင် Google က ကိုယ်ကျိုးကြည့်တာများတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Google က သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ လူသုံးနည်းပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သူ့အတွက်သိပ်အကျိုးအမြတ် မရနိုင်တဲ့ အရာတော်တော်များများကို ရပ်တန့်ထားတာရှိသလို ပိတ်ပစ်ခဲ့တာတွေအများကြီး ရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် Google Talk ကိုပဲကြည့် တစ်ခြား နိုင်ငံတွေတော့ မသိဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို ဂျီတော့က လူတိုင်းလိုလို သုံးကြတယ်။ ဒီ Instant Messenger လို့ခေါ်တဲ့ Gtalk ကို Google အနေနဲ့ တကယ်သာ စေတနာရှိရင် ဒီ့ထက် အသုံးတည့်အောင် တစ်ခြား Features တွေ ထည့်ပေးလို့ ရနေတာ ကြာကြာလှပြီ။
ဒါပေမယ့်လည်းခုချိန်ထိ Google Talk နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှ ကောင်းနိုးရာရာထပ်ပေါင်း ဖြည့်ပေးတာ မတွေ့ရသေးဘူး။ နောက်ထပ်ရှိတာတွေ ပြောရရင် Image editor – Picnic ၊ လူသိနည်းပြီး သိပ်မသုံးကြတဲ့ Google Wave နောက်ပြီး Offline search software - Google Desktop နောက် Google start page - iGoogle အခု RSS newsreader - Google Reader. ဒါတွေကိုဘာလို့ ဆက်မလုပ်သလဲ ? သူ့အတွက် အကျိုးမများလို့ပေါ့။ အကောင်းဘက်ကနေ တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Google ဆိုတာ လူတွေ တည်ထောင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုပဲဗျာ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားတော့ ကိုယ်ကြည့်ကြတာပေါ့။ ကြည့်လည်း ကြည့်ရမှာပေါ့။ ဒါဘာများဆန်းလဲ။ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိ အချိန်ကုန် ဝင်ငွေမရတဲ့ အလုပ်ကို တစ်သက်လုံး အလုပ်အကျွေးပြုပြီး ဘယ်သူလုပ်မလဲ။ ကျွန်တော်လည်း မလုပ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် Google ထက်ဆိုးတာတွေ အများကြီး။ အခု Google Reader ဖျက်တော့မယ်ဆိုတော့ သူ့ဆီမှာ RSS subscriptions လုပ်ထားတာတွေ တစ်ခြားနေရာတစ်ခုကို ရွှေ့ရတော့မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Google Reader နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ဆိုရင် Feedlyကို သဘောကျတယ်။
Google Reader လိုမျိုး တစ်ခြား web app တွေရော၊ Offline Reader တွေ တော်တော်များများ စမ်းသုံးကြည့်ဖူးပေမယ့် Feedlyကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် သုံးရတာ အဆင်အပြေဆုံးပဲ။ သူက Google Reader လိုမျိုးပဲ Web app တစ်ခု နောက်ပြီး သူ့မှာ iOS သုံးတဲ့သူတွေ Android သုံးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း apps ရှိတယ်။ တစ်ခြားဟာတွေထဲကဆိုရင် Bloglines နောက်ပြီး Feedspot နောက် Old Reader နောက်ဆုံး NewsBlur ဒါအကုန် မဟုတ်သေးဘူး တစ်ခြား web based မဟုတ်ပဲ mobile devices တွေမှာ RSS feeds အတွက်သုံးတဲ့ Apps တွေရှိသေးတယ်။ Google Reader ကတော့ ပင်မရေသောက်မြစ်လို ဖြစ်နေတော့ ဘယ်နေရာကနေ ဘယ် Apps နဲ့ သုံးသုံး အမြဲ sync ဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေနေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ အဲ့ဇာတ်လမ်းကလည်း ခုတော့ တစ်ခန်းရပ်ခဲ့ပါပြီ။